Ogaden News Agency (ONA) – Banaabax Balaadhan oo Lagaga soo Horjeedo Gumaysiga Ayaa Lagu Horqabtay Shirka G20 ee ka Socday Australia
Posted by ONA Admin	/ November 16, 2014
Waxaa maanta oo taariikhdu tahay 16/11/14 banaanbxa balaadhan ku horqabtay madasha uu ka dhacayo shirka dawladaha ugu dhaqaalaha roon caalamka ee loo yaqaano G20 jaaliyadda S.Ogadenya iyo jaaliyadda Orormada.
Shrikan oo ka socday magaalada Brisbane ee cariga Austraaliya, ayay jaaliyadaha ku muujiyeen siday ugaga soo hor jeedaan gumaysiga Itoobiya iyo tacadiyada xad dhaafka ah ee ciidamada gumaystaha uu ka wado dhulka Ogaadeeniya.
Jaaliyada oo todobaadanba qorshaynaysay qabashada mudaaharaadka ayaa saaka aroornimadii horaba ku waabariistay iyagoon u kala hadhin, waxayna la tageen agabkii ay ku mudaharaadayeen sida boodhadhka ay ku xardhanaayeen gabood falada uu gumaysiga Itoobiya uu ku hayo shacabka dulman ee S.Ogaadeeniya.
Ujeedada mudaharaadka oo ahayd in indhaha caalamka ay jaaliyadu tusto xasuuqa ba’an ee dhulka S.Ogaadeeniya ka socda iyadoo ay jaaliyadu ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah gumaysiga itoobiya mudaharaadka as oo xamaasad qiiro wadanimo ka muuqatay ayaa waxaa halkaas soo jiitay dhamaan telefishanadii iyo idaacadihii caalamka gaar ahaan telefishinada austraaliya oo waraysiyo ka qaaday masuuliyiintii jaaliyada oo dhamaan Laga daawaday dalka austraaliya.
Waxaa ka mid ahaa dadka la wareystay ee sida fiican uga xogwaramay xaaladda ay ku sugan yhihiin shacabka Ogadenya Halgame Cabdi Koreeye oo ah gudoomiyaha jaaliyadda.
Gadabagadii mudaharaadka ayaa wax wayn ka badali waxa uu ra’yi caalamku ka qabo qadiyada ogaadeeniya jaaliyaduna way ka gaadhay dhamaan ujeedinkii ay ka lahayd isagoo shirkaas ay joogaan dhamaan wadamada horay u maray madaxdoodii.
FG wixii maqal iyo muqaala dhawaan naga fisha